I-Semalt inikeza izizathu ezinhlanu zokungavumeli umgwaqo ongekho emthethweni
Ungumthengisi wokuqukethwe noma umnikazi webhusayithi osebenzela ekuthuthukiseni imali yakho yokuthengisa? I-Black ngoLwesihlanu ingenye yezinsuku ezihamba phambili kulo lonke unyaka ongenza ukuthengiswa kwakho kungene. Izibalo zibonisa ukuthi ukuthengiswa okungaphezu kwezingu-$ 3 billion kubhalwe ngoNovemba omnyama 2016. Lo nyaka, imali yokuthengisa ikulindeleke ukuthi ikhuphuke ibe yizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi zamaRandi ezingu-3.36, ekhombisa inani elingu-9.4% uma liqhathaniswa nonyaka odlule.
Unyaka ngamunye, amawebhusayithi e-commerce athola izivakashi ezingaphezu kwezigidi ezingu-20, lapho izivakashi ezingu-20% ziyi-bots nezinhloli zewebhu. Bonke abathengisi bokuqukethwe abahlinzeka ngamasevisi ku-intanethi bangathanda ukufeza idatha ehlanzekile neyinkimbinkimbi emibikweni yabo ye-Google Analytics.
Ama-bad bad angabhubhisa ukuthengiswa kwakho kwe-Black Friday bese ushintsha umkhankaso wokwenza umsebenzi wokuqondisa okungalungile. I-Bad bots ayithinti ukukhiqizwa kwemali nokuthengisa, kodwa futhi nokusebenza kwebhizinisi le-B2C ne-B2B ku-intanethi. Ama-bad, i-traffic yangaphakathi, nezinhloli zewebhu zingathinta kakhulu idatha yakho ye-Google Analytics kanye nemibiko. U-Alexander Peresunko, u-14 (Semalt uMenenja weNtuthuko yabaThengi, unikeza izindlela ezilandelayo ezinhlanu ezimbi ezingathinta ukuthengiswa kwakho kwe-Black Friday kanye nemali engenayo:
1. Imibiko engalungile yewebhusayithi
Ama-bots asebenzayo asebenza ukuze ahlasele idatha yakho ye-GA ngokungcola ithrafikhi eqhutshwa kusayithi lakho. Ekuhambeni kwesikhathi, kuba yinto encane kakhulu yokuhlukanisa imoto yangempela neyiyibanga kudeshibhodi ye-Google Analytics yewebhusayithi yakho. Ukungahunyushwa kahle kwedatha emibikweni yakho ye-GA kungakuholela ekwenzeni izinqumo zebhizinisi ezingalungile. Hlanganisa ithrafikhi ye-bot kusuka kudatha yakho usebenzisa amathuluzi we-GA ukuze ugweme ukuwa okunamandla ku-Black Friday yakho uma kuqhathaniswa nonyaka odlule..
2. Okuhlangenwe nakho komsebenzisi
I-bots embi ihlasela amawebhusayithi e-commerce ngokungahambi kahle ngokunciphisa ukusebenza kwabo bonke. Lesi simo sinomthelela omubi womsebenzisi ochofoza emuva ngemva kokuvakashela amakhasi ngejubane elincane. Ngokuhamba kwesikhathi, izivakashi zifinyelela kwezinye amawebhusayithi ukuqedela ukuthenga kwazo.
3. Ama-Ghost Carts
Ukushiya iCote kuye kwaba yinye yamasu asemqoka asetshenziswa ama-bots ukushayela abathengi bangempela kanye nezivakashi kumawebhusayithi angalungile. I-Bad bots isebenza ukuze ithathele amanye ama-oda emikhimbini yokuvimbela izivakashi ezisemthethweni ekufinyeleleni imikhiqizo yangempela. Izingqwembe ze-Ghost zingathinta kakhulu ukuthengiswa kwakho kwe-Black Friday nesizukulwane sezimali. Ungavumeli ama-bad okubi athathe lokhu okuvela kuwe. Vimba i-Darodar uphinde ubheke ithrafikhi kusuka kuwebhusayithi yakho ye-e-commerce ngokungeza isihlungi esisha kusayithi lakho.
4. Umgwaqo wenkohliso
Bot traffic, traffic yangaphakathi, kanye nomgwaqo onobugebengu kungalimaza ukuthengisa kwakho Black Friday. Laba abanikazi bewebhusayithi bezintandokazi kanye nababonisi bokukhangisa ukukholelwa ukuthi ithrafikhi eqhutshwa kumasayithi abo ingokoqobo. Abanikazi bewebhusayithi kumele baqaphele ukugwema ukukhokha amadola emgwaqweni owenziwe yi-bots bad.
5. Ukukhathala komsebenzi
I-Bot traffic ithinta ngaphezu kwezingu-58% zethrafikhi ku-intanethi. I-traffic yangaphakathi eyakhiwe kanye ne-bot traffic ingaqeda iwebhusayithi yakho emahoreni ayikhulu. I-Bot traffic ingaholela ekudleni kwama-dollar nesikhathi. Finyelela ukuthengisa okuningi nemali kuLwesihlanu wakho omnyama ngokuvimbela ithrafikhi engadingeki kusuka kuwebhusayithi yakho.
I-Bot traffic ingaba nomthelela omkhulu ekuveleni nasekukhuleni kwe-website yakho. Ukuqinisekisa ukuthi ufinyelela idatha ehlanzekile nenembile ku-Google Analytics yakho ibaluleke kakhulu. Gwema ukwenza izinkokhelo ezingadingekile ku-spammers ngokufaka imoto engafanele kuwebhusayithi yakho Source .